လွယ်ကူသော Buttercream ပန်းများနှင့်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ - အခမဲ့ဗီဒီယို
အစစ်အမှန်အစပြုသူအဘို့အလွယ်ကူ buttercream ပန်းပွင့်
ဤလွယ်ကူသော buttercream ပန်းများသည် buttercream လေ့လာသူအတွက်အကောင်းဆုံးသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ သငျသညျအရင်ကပန်းပွင့် piped ဘယ်တော့မှရင်တောင်ဒီ5ပွင့်ချပ်ပန်းပွင့်လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်!
buttercream ပန်းများကိုပြုလုပ်ရန်မည်သည့် buttercream မျိုးသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သငျသညျတော်တော်များများမည်သည့် buttercream, ကြာပွတ်မုန့်သို့မဟုတ် ganache နှင့်အတူပိုက်နိုင်ကြောင်းထွက်ရှာတွေ့မှသင်တုန်လှုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကြိုက်တဲ့ buttercream လိုမျိုး အမေရိကန် Buttercream အပူကိုခံနိုင်ရည်ပိုရှိမည်ဖြစ်သော်လည်းအပိုသကြားများသောကြောင့်ပွင့်ချပ်အစွန်းများသည်အနည်းငယ်ပိုမိုဆူညံနေလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်အပိုဆုတစ်ခုမှာသူတို့ crust ပြီးနောက်၊
ငါကြိုက်တယ် လွယ်ကူသော buttercream နှင်းခဲ အနားတွေကိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အပူပေးဖို့ပိုလွယ်ကူလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ပန်းတွေကိုပိုက်ဖို့ပဲ။ ပန်းများကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်ကျွန်ုပ်၏လွယ်ကူသော buttercream frosting စာရွက်တွင်သင်သည်ထောပတ်တစ်ဝက်သို့မဟုတ်အားလုံးအစားထိုးနိုင်သည်။
ဆန် krispie ရယူထားသောပုံစံများသို့ပုံသွင်းရန်
လွယ်လွယ်ကူကူ buttercream ပန်းပွင့်လိုလားသူ - သင်ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက် ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်တွင်သင့် buttercream သည်ချောမွေ့ပြီးပူဖောင်းမကင်းစေရန်သေချာစေပါ။
လွယ်ကူသော buttercream ပန်းပွင့်စေရန်။ သင်အနည်းငယ်ကိရိယာများသာလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် Michael ရှိခဲ့သော်လည်းသင်ဤအရာများကိုအွန်လိုင်းတွင်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။
အဆက်အစပ် (optional ကို)
# 104 ပိုက်အစွန်အဖျား
နံပါတ် (၃) ပိုက်အစွန်အဖျား (optional)
နံပါတ် ၃၅၂ အစွန်အဖျား (optional)
3 ခုတ်ဖြတ်ထားသောအဝါရောင်စက္ကူရင်ပြင်များ″ x3″
သင်မည်သို့လွယ်ကူသော buttercream ပန်းများကိုလုပ်သလဲ?
သင်၏သားရေစာကိုသေးငယ်သောရင်ပြင်များ (3″ x3 about ခန့်) သို့ခုတ်ပါ။
သင့်ရဲ့ buttercream အရောင်။ ငါလျှပ်စစ်ပန်းရောင်အစားအစာအရောင်နဲ့ regal ခရမ်းရောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် အမေရိကတိုက်
ပိုကြီးတဲ့အပိုင်းအစကိုပိုက်အိတ်ထဲထည့်လိုက်ပါ။ coupler ၏ထက်ဝက်သည်အပေါက်ထဲသို့ဖြတ်နိုင်အောင်ပိုက်အိတ်၏အစွန်အဖျားဖြတ်တောက်ပါ။
သင်၏ 104 piping tip ကို coupler သို့ချိတ်။ အစွန်အဖျားလုံခြုံမှုရှိစေရန် ဦး ထုပ်တွင် screw ပါ
သင့်အိတ်ကိုသင့်ကြိုက်နှစ်သက်သော buttercream အရောင်ဖြင့်ဖြည့်ပါ။
သားရေစုပ်စတုရန်းတွဲကိုကပ်ရန်သင်၏ပိုက်လက်သည်းတွင် buttercream အနည်းငယ်ထည့်ပါ
“ U” ပုံသဏ္smallာန်အနည်းငယ်ကို ပြုလုပ်၍ သင်၏ပထမဆုံးသောပွင့်ချပ်ကိုပိုက်ချပြီးအလယ်မှ စ၍ ရပ်ပါ။
သင်၏လက်သည်းကိုလှည့်ပါ။ သငျသညျ5ပွင့်ချပ်ပိုက်ကြသည်သည်အထိဆက်လက်။
ပန်းချီဆွဲခြင်းနှင့် cookie စာရွက်ပေါ်တွင်ထားခြင်းဖြင့်လက်သည်းမှပန်းကိုဖယ်ရှားပါ။ ကျနော်တို့ကိတ်မုန့်ပေါ်သူတို့ကိုမထားမီကျနော်တို့ buttercream ပန်းပွင့်အေးခဲပါလိမ့်မယ်။
လွယ်ကူသော buttercream ပန်းပွင့်လိုလားသူ - ပန်းတစ်ပွင့် ၁၀-၁၅ ကိုပထမ ဦး ဆုံးလေ့ကျင့်ပါ၊ သင်သည်သင်၏နည်းစနစ်ကိုညှစ်ခြင်းနှင့်တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းသင်လျင်မြန်စွာလေ့လာလိမ့်မည်။ ပန်းပွင့်များကိုပန်းကန်ထဲသို့ပြန်ချလိုက်ပါ။
ဒါပဲ! ဒါကသင်လွယ်ကူသော buttercream ပန်းပွင့်စေပုံပါပဲ။ ငါသည်ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့ကြလိမ့်မယ်လာမည့်မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်ကိုပြန်လည်လုပ်ဖို့ငါ့အပွင့်ကိုလုပ်! ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာအတွက်သတိထားပါ။
ဤအတောအတွင်း၊ သင်သည် ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော buttercream ပန်းများကိုစစ်ဆေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါကဤအရာကိုသေချာစွာကြည့်ပါ buttercream ပန်းပွင့်ကိတ်မုန့်သင်ခန်းစာ guest ည့်သည်နည်းပြဆရာ Danette က Short ထံမှ။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
မည်သူမဆိုလုပ်နိုင်သောအရသာရှိပြီးကြွယ် ၀ ပြီးလွယ်ကူသော buttercream frosting စာရွက်။ ဒါကအပေါ်ယံလွှာ buttercream မဟုတ်ပါဘူး။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအနည်းငယ်ထွန်းလင်းတောက်ပနေတယ်။ လုပ်ရန် ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးအရသာကင်းသည်! အလင်း, fluffy နှင့်မချိုလွန်း။ buttercream ပန်းပွင့်များကိုပိုက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
ပြင်ဆင်ချိန် -၅ မိနစ် ရောစပ်ချိန် -နှစ်ဆယ် မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၂၅ မိနစ် ကယ်လိုရီ849kcal
▢၂၄ oz unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်။ သင်ဆားငန်ထားသောထောပတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အရသာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပြီးသင်နောက်ထပ်ဆားထွက်ရန်လိုအပ်သည်
▢၂၄ oz သကြားမှုန့် လျှင်မတစ်အိတ်ထဲကနေရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါ
▢၆ oz Pasteurized ကြက်ဥလူဖြူ
▢၁ အလွန်သေးငယ်သော drop ခရမ်းရောင်အစားအစာအရောင် ဖြူနှင်းခဲဘို့ (optional ကို)
ကြက်ဥအဖြူနှင့်အမှုန့်သကြားတို့ကိုမတ်တပ်ရပ်သည့်ဖလားတွင်ထည့်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအနိမ့်အမြင့်တွင်ပေါင်းစပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ၅ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်စွာရိုက်ပါ
သင့်ရဲ့ထောပတ်ကိုအတုံးကြီးထဲထည့်ပြီးပေါင်းထည့်ဖို့ whisk attachment နဲ့ရိုက်ပါ။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးအခွံကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကပုံမှန်ပါပဲ ဒါဟာအစတော်တော်လေးအဝါရောင်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ ကြာပွတ်ကိုဆက်လုပ်ပါ
အဖြူရောင်၊ အလင်းရောင်နှင့်တောက်ပသည့်အထိ ၈-၁၀ မိနစ်အထိကြာမြင့်အောင်ရိုက်ပါ။
paddle attachment သို့ပြောင်းပြီး buttercream ကိုအလွန်ချောမွေ့စေရန်နှင့်လေပူဖောင်းများကိုဖယ်ရှားရန် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ခန့်ရောနှောပါ။ ဤအရာသည်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ကအရမ်းကိုနူးညံ့သောနှင်းခဲကိုလိုချင်လျှင်၎င်းကိုမကျော်ချင်ပါ။
တစ် boxed ကိတ်မုန့်အိမ်လုပ်အရသာအောင်ဘယ်လို
ခြစ်ရာကနေ vanilla ကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
မှန် glaze ကိတ်မုန့်အအေးခံရသင့်ပါတယ်